အဆိုပါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအမျိုးအစားများ - SAM ကို-ဗြိတိန်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » သတင်း » သတင်း » အဆိုပါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအမျိုးအစားများ
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2018-10-20 မူလ:ဆိုက်ကို
သင်သည်သင်၏ဥယျာဉ်တော်မှအခြို့သောအလှဆင်ရှုခင်း add ချင်တယ်ဆိုရင်,ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး ကျိန်းသေသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအသုံးဝင်သောနှင့်တန်ဆာဆင်နှစ်ဦးစလုံး, သင့်မိသားစုနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဘို့အလုံခြုံခြံစည်းရိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ဒီတော့ရဲ့ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး၏စတိုင်များကြည့်ယူကြကုန်အံ့။
သီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုးဟာ pickets အကြားမျှကွာဟချက်အတူပြီးပြည့်စုံသော privacy ကိုအတွက်အဆုံးစွန်ကယ်တင်တတ်၏။ ပေါင်းထပ်မံအစစ်အမှန်သစ်သား၏အသွင်အပြင်ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းထူးခြားတဲ့, မှောင်ရိပ်များနှင့် Semi-ပွင့်လင်းအစွန်းအထင်း Blend အပါအဝင်တစ်ခုကျယ်ပြန်အရောင်ရာပူဇော်သက္ကာဘို့ - အ privacy ကိုလိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်စစ်မှန် woodgrain texture နှင့်ဆန်းသစ်သောအင်္ဂတေနု texture ပါရှိပါတယ်။ အားလုံးသီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး Styles6& quote feature; အပိုကြာရှည်ခံမှုထည့်သွင်းဖို့အောက်ခြေရထားလမ်းတစ်ခုလူမီနီယမ်အားဖြည့်နှင့်အတူလျှာကိုနှင့် Groove Slat ။ အလှဆင်ထိပ်နှင့်စတိုင်များတစ်အမျိုးမျိုးရှိသမျှအရသာကျေနပ်မှရရှိနိုင်ပါသည်။ ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအားလုံး Styles နှင့်အထွဋ်အဖြူနှင့် tan အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
semi-ပုဂ္ဂလိကခြံစည်းရိုးရဲ့ privacy နဲ့ Airflow ၏ပြီးပြည့်စုံသောဟန်ချက်ပေးပါသည်။ နေဆဲ privacy ကို့လက်ျာငွေပမာဏကိုကမ်းလှမ်းစဉ်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး၏ဤအမျိုးအစား, အလင်းနှင့်လေထုထဲသို့ဝင်ခွင့်ပြုပါရန် pickets အကြားအနည်းငယ်အကွာပါရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရေကူးကန်ပတ်ပတ်လည်ခြံစည်းရိုးတစ်ကံဇာတာကုန်ကျရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ တစ်ဗီနိုင်း coated သို့မဟုတ်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးကွင်းဆက် link ကိုခြံစည်းရိုးကို install အားဖြင့်ပိုက်ဆံသိမ်းဆည်းပါ။ ကျနော်တို့ကဒီမှာပစ္စည်းထုတ်လုပ်နှငျ့သငျအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံချွေတာသင်ညွှန်ကြားကြောင့်တင်ပို့မည်။ သင့်ရဲ့ကုဒ်လိုအပ်ချက်များကို fit မှမရရှိနိုင်ပါကွဲပြားခြားနားကွက်အရွယ်အစား။
ဗီနိုင်း Picket ခြံစည်းရိုးတစ် timeless ကြည့်တပ်ဆင်ထားတဲ့ဂန္ခြံစည်းရိုးစတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစွယ်စုံခြံစည်းရိုးကွဲပြားခြားနားသောရှုခင်းများအမျိုးမျိုးအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးဆွဲဆောင်အလှဆင်နယ်နိမိတ်ကိုဆက်ကပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ picket စတိုင်များနှစ်ဦးစလုံးအစဉ်အလာများနှင့်ခေတ်ပြိုင်ဒီဇိုင်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦး picket ခြံစည်းရိုး၏ timeless ကြည့်ရရှိရန် - ထိုဆက်ပြောသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲ! ကျနော်တို့ဗီနိုင်း picket ခြံစည်းရိုးရွေးချယ်စရာတစ်ခုအကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်; ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီနိုင်း picket ခြံစည်းရိုးအဘယ်သူမျှမပန်းချီသို့မဟုတ်သံချေးဖယ်ရှားလိုအပ်, ရာသီဥတုအခြေအနေများ outlast ပါလိမ့်မယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရွေးချယ်စရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးရှုမြင်ကြသည်။
သင်တစ်ဦးဂန္, နှစ်သက်ဖွယ်နှင့်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးများအတွက်လွယ်ကူသော option ကိုရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ဗီနိုင်းရာဇမတ်ကွက်ခြံစည်းရိုးသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရာဇမတ်ကွက်ခြံစည်းရိုးအများဆုံးမကြာခဏဥယျာဉ်နှင့်ဟင်းလင်းပြင်မှာတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုသုံးနိုင်တယ်။ ရာဇမတ်ကွက်ခြံစည်းရိုးအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုမှုနှင့်အတူခြံစည်းရိုးတစ်ဦးဂန္စတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အာကာသပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေတစ်အရေအတွက်ရာဇမတ်ကွက်ခြံစည်းရိုးကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါဘက်စုံနှင့်သစ်သားရာဇမတ်ကွက်၏ရှိအောင်နှစ်သက်သဘောသဘာဝကြောင့်ရောနှောဥယျာဉ်များ, ခြံစည်းရိုးများနှင့်ဟင်းလင်းပြင်များအတွက်အကြိုက်ဆုံးစေသည်။ ရာဇမတ်ကွက်ကိုလည်းမကြာခဏကိုက်အတွက် Divide, မုတ်အောက်ရှိလမ်း, နှင့်နံရံ freestanding အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဒါဟာပွင့်လင်းအာကာသကိုတက်ဖဲ့သို့မဟုတ်သင့်ပြင်ပဒေသများသို့တစ်စီးဆင်းမှုနှင့်ရွေ့လျားမှုအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြထားတဲ့ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအမျိုးအစားများအပြင်, ကျနော်တို့ဒါအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောမွေးမြူရေးခြံရထားလမ်းအဖြစ်များစွာသောအခြားအမျိုးအစားများ, ရှိသည်, သေးငယ်တဲ့ခြံစည်းရိုးဥယျာဉ်နှင့်။ သငျသညျထုတျကုနျသတငျးအခကျြအဘို့အကြှနျုပျတို့၏ website browse နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခြံစည်းရိုးအရည်အသွေးမြင့်၏ဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်စပ်မေးခွန်းများကိုသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်ကြိုဆိုကြသည်။ ငါကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သင်သည်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံဆောင်ကြဉ်းနိုင်မမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအမျိုးအစားများ ဗီနိုင်းဓားရေးပြိုင်ပွဲ ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးမျိုး ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး၏အကွာအဝေး ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုး semi-ပုဂ္ဂလိကခြံစည်းရိုး ဗီနိုင်းရာဇမတ်ကွက်ခြံစည်းရိုး ဗီနိုင်း picket ခြံစည်းရိုး